လူသားမျိုးနွယ်တွေ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဘယ်လိုရောက်လာခဲ့ကြလဲ ? - JAPO Japanese News
ကြာ 25 Jul 2019, 17:03 ညနေ
အာဖရိကတိုက်မှာ လူသားမျိုးနွယ်တွေက မျောက်တွေကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နေရာတစ်နေရာပြီးတစ်နေရာ ရှာဖွေနေထိုင်ကြရင်းနဲ့ လူသားတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဟင် ? နေပါဦး….
ကုန်းပေါ်မှာဆိုရင် နယ်ချဲ့ပြီးဆက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာသိပေမယ့် ပင်လယ်ထဲမှာ ဆိုရင်ရောဘယ်လိုသွားကြလဲ ?
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ လောက်က ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ သူတွေက ပင်လယ်ကြီးကို ဘယ်လိုများဖြတ်ကျော်ခဲ့တာလဲ ?
တကယ်တော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က သင်္ဘောလုပ်တဲ့ကိရိယာက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ တုန်းကနဲ့ အတူတူပဲဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာ ပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ လှေကိုစီးပြီး အိုကီနာဝါ ရော်နဂုနိကျွန်း ကိုတည်ပြီးသွားကြပါတယ်။
လမ်းခရီးမှာ သမုဒ္ဒရာရဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေရှိပြီး နည်းနည်းလေးပေါ့သွားတာနဲ့ ရေစီးထဲမျှောပါသွားနိုင်ပါတယ်။
သံလိုက်အိမ်မြောင်ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာ သေးသေးလေးပဲမြင်ရတဲ့ ကျွန်းလေးကို မျက်ခြေမပျက်ကြည့်နေရင်း ပျောက်ကွယ်သွားမလား ?
နှစ်ရက်မြောက်မှာ ဆက်ပြီးတော့ လှော်နိုင်ပါ့မလား ?
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားရော၊ စိတ်ခွန်အားတွေရော အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိနိုင်တဲ့ ဒီလိုပရောဂျက်က ခုခေတ်မှာပင်လယ်ကြီးကို လွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်သန်းနိုင်ရာမှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါ့မလားလို့ တွေးမိတဲ့သူတွေလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။
ခေတ်မှီနည်းပညာတွေနဲ့ ပံ့ပိုးထားတာကြောင့် သေဆုံးတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်မှမရှိခဲ့ဘဲ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ လောက်ကလူတွေဟာ ဒီလိုအထောက်အပံ့တွေမရှိဘဲ ပင်လယ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်တွေကိုရောက်မှ ရှိလာတဲ့နည်းလမ်းတွေလို့ထင်ပေမယ့် တကယ်ပဲအဲ့လိုလား ?
ခုချိန်မှာတော့ နည်းပညာတွေရဲ့ အထောက်အပံ့တွေကိုယူထားပေမယ့် လက်တွေ့မှာမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုရင် လက်တွေ့မှာ လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့က တခြားနည်းလမ်းတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပြီး ကိုယ်တွေးထားတဲ့သမိုင်းတွေက အပြောင်းအလဲတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ယောကျ်ားလေး စုစုပေါင်း ၅ ယောက် ခရီးနှင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေ ဘေးကင်းကင်းနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနိုင်ပါမလား ?
လူတွေမှာ အမြီးရှိသင့်လား ?
Yokohama မြို့က ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆိပ်ကမ်းမြို့လား ?
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ အပြာရောင် LED
ရှုပ်ထွေးလွန်းလှတဲ့တိုကျိုမြို့ရဲ့ လမ်းကြောင်းမြေပုံ နှင့် သိမှတ်စရာများ!!
နှင်းတွေကြားမှာ ပွင့်တဲ့ဆာကူရာပန်းရဲ့အလှကို ခံစားကြည့်ကြစို့ !